တိုရေးကိုရောင်းချခဲ့ခြင်းက မှားယွင်းနိုင်ကြောင်း ဂွါဒီယိုလာဝန်ခံ ၊ ဒါဘီပြိုင်ဘက်မန်ယူအသ?? - Yangon Media Group
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက မိမိအနေဖြင့် ဘာစီလိုနာတွင်ရှိခဲ့စဉ် က ကွင်းလယ်လူယာယာတိုရေးကို ရောင်းချမိခဲ့ခြင်းမှာ မှားယွင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ် နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
ယာယာတိုရေးသည် ၂ဝ၁ဝတွင် ဘာစီလိုနာမှ မန်စီးတီးသို့ရောက်ရှိ လာပြီးနောက် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်း ပြကစားနိုင်ခဲ့ရာ ထိုစဉ်က တိုရေးကို ရောင်းချမိခဲ့ခြင်းမှာ မှားယွင်းကောင်း မှားယွင်းနိုင်သည်ဟု ဂွါဒီယိုလာကဆို ခဲ့သည်။
ဂွါဒီယိုလာက ”ယာယာတိုရေးရဲ့ အရည်အသွေးကို သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ နည်းပြတိုင်းဟာ အမှားလုပ်တတ်ကြတာပဲဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ကိုရောင်းချခဲ့မိတာ မှား ယွင်းကောင်းမှားယွင်းပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ဘာစီလိုနာမှာဆက်ထိန်းဖို့ ကျွန် တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူနဲ့သူ့အေး ဂျင့်က မန်စီးတီးကိုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးသွားတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တိုရေးအနေနဲ့ မန်စီးတီးမှာ လာကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာ လုံးဝမှန်ကန်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေရော၊ အောင်မြင်မှုတွေပါ အမြောက်အမြား ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
မန်စီးတီးနှင့် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရာသီကုန်တွင် အသင်းမှ ထွက်ခွာမည့် တိုရေးမှာ မန်စီးတီးက စားသမားဘဝတွင် ပရီးမီးယားလိဂ် ဆုဖလားသုံးကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့ချိန်တွင် မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ယူမှာ ချန်ပီယံဆုနှစ်ကြိမ်သာရခဲ့ခြင်းကြောင့် မန်ယူထက် အောင်မြင်မှုပိုရခဲ့ခြင်းက မန်စီးတီး ကစားသမားဘဝတွင် အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
တိုရေးက ”မန်စီးတီးကိုကျွန် တော်ရောက်လာတုန်းက သူတို့ဟာ မန်ယူကို သူတို့ရဲ့လောင်းရိပ်အောက် ရောက်အောင် လုပ်ချင်နေတဲ့အသင်း အဖြစ်တွေ့ရပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ဒီရည် မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ခဲ့တာက မန်စီးတီးကစားသမား ဘဝမှာ ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်း ဆုံးစွမ်းဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယာယာတိုရေးက ၂ဝ၁၁ အက်ဖ်အေဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် မန်ယူကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းမှာ မန်စီးတီး၏အောင်မြင်မှုများ၏ အစဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုရေးက ”ဒီအက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီပွဲက ကျွန်တော့်ရဲ့သွင်းဂိုးက မန် ယူကိုအလဲထိုးဖို့ မန်စီးတီးလာပြီဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်း မှာ အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲ ကို ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
YBS တွင်ပိုက်ဆံအကြွေပြဿနာပြေလည်စေရန် သုံးလအတွင်း Card စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင??
လျှော်ဖြူ အစေးဝယ် ပွဲစားများ လျှော်ဖြူ စိုက်ပျိုးမှုများသည့် ပခုက္ကူနှင့် ညောင်ဦးမြို့သို့